သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းအချက်အမှားတွေကို တွေးပြီးမှယုံကနေ အစဉ်တစိုက် ဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းအချက်အလက်မှားတွေ လူတွေကို နားလည်မှုလွဲအောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းတုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ခြားသောနိုင်ငံများတွင်လည်း တွေ့ကြုံနေရသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံနိုဘယ်ဆုရှင် ပရော်ဖက်ဆာ တာဆူကုဟွန်ဂျိုက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ တရုတ်နိုင်ငံက ဝူဟန်က ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကိုဗစ် ၁၉ သည် လူလုပ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေနဲ့ ဖွင့်ဟလိုက်ပြီ” ဆိုတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်ဟာ ဖေ့ဘွတ်ခ်နဲ့ တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာ တော်တော်များများပြန့်နှံ့နေတာကို တွေ့ရှိရခဲ့ရပြီး တွေးပြီးမှယုံကနေ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ သတင်းမှားဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ (၁) ပရော်ဖက်ဆာ ဟွန်ဂျိုဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ကင်ဆာကုထုံးတစ်ခုကြောင့် ဆေးပညာနိုဘယ်ဆု ရရှိခဲ့ပြီး သူ့အနေနဲ့ […]
တွေးပြီးမှယုံApril 30, 2020
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းအချက်အမှားတွေကို တွေးပြီးမှယုံကနေ အစဉ်တစိုက် ဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းအချက်အလက်မှားတွေ လူတွေကို နားလည်မှုလွဲအောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းတုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ခြားသောနိုင်ငံများတွင်လည်း တွေ့ကြုံနေရသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံနိုဘယ်ဆုရှင် ပရော်ဖက်ဆာ တာဆူကုဟွန်ဂျိုက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ တရုတ်နိုင်ငံက ဝူဟန်က ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကိုဗစ် ၁၉ သည် လူလုပ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေနဲ့ ဖွင့်ဟလိုက်ပြီ” ဆိုတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်ဟာ ဖေ့ဘွတ်ခ်နဲ့ တခြားလူမှုကွန်ရက်တွေမှာ တော်တော်များများပြန့်နှံ့နေတာကို တွေ့ရှိရခဲ့ရပြီး တွေးပြီးမှယုံကနေ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ သတင်းမှားဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ (၁) ပရော်ဖက်ဆာ ဟွန်ဂျိုဟာ ၂၀၁၈ ခ...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ... ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဖေ့ဘွတ်စ်ပေ့ချ်ကနေ COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေး ဗွီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အိမ်အပြင်ကပြန်လာပြီးတိုင်း၊ အများသုံးပစ္စည်းတွေကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း၊ အိမ်သာသုံးပြီးတိုင်း၊ အစာမစားမီတိုင်း၊ နှာချေ/ချောင်းဆိုး/နှာရည်ညှစ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း၊ နှာခေါင်းစည်း(Mask) ကို မကိုင်တွယ်မီနဲ့ ကိုင်တွယ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေအသုံးပြုစက္ကန့်(၂၀)ကြာ စနစ်တကျဆေးပါ။ ဆပ်ပြာနှင့်ရေအလွယ်တကူမရလျှင်(Alcohol 60%) အနည်းဆုံးပါဝင်သော လက်သန့်ဆေးရည်အသုံးပြုဆေးကြောပါ။ #credit MOHS
“သတင်းတု၊ သတင်းမှား၊ ကောလာဟလသတင်းများရေးသားဖြန့်ဝေနေခြင်းများ
တွေးပြီးမှယုံMarch 25, 2020
မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ၏ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် ၁၀/ ၂၀၂၀ . ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။ . “သတင်းတု၊ သတင်းမှား၊ ကောလာဟလသတင်းများရေးသားဖြန့်ဝေနေခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန် သတိပေးချက်” . ၁။ ယခုအခါ COVID – 19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် သတင်းတု၊ သတင်းမှား၊ ကောလာဟလသတင်းများကို ရေးသားဖြန့်ဝေနေခြင်းများ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ . ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ COVID – 19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် သတင်းတု၊ သတင်းမှားများ၊ ကောလာဟလများရေးသားဖြန့်ဝေနေခြင်းကို မပြုလုပ်ကြပါရန်နှင့် တွေ့ရှိပါက သတင်းမီဒီယာဥပဒေအရ ထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ . မူရင်းလင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အမိန့်ကြေညာစာ ၁၉/၂၀၂၀ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကူးစက်ရောဂါ (သို့မဟုတ်) တိုင်းကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီး၊ ထုတ်ပြန်ချက်အမိန့်ကို မရုတ်သိမ်းသမျှကာလပတ်လုံး အတည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ထိုပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ သတင်းဝက်ဆိုက်ဒ်တွေ၊ ဖေ့ဘွတ်စ် သတင်းပေ့ချ်တွေကနေ “ကိုရိုနာဗိုင်းစ်ကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးသွားသော်လည်း တုန်လှုပ်မှုမရှိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ” ဆိုတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံအမှားတွေကို အသုံးပြုပြီး သတင်းတွေတက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းအမှားတွေမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း-ရန်ကုန်ကလည်း တုန့်ပြန်ပြောဆိုထားတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သတင်းမှားတွေကို ပြုလုပ်သူတွေ၊ […]
တွေးပြီးမှယုံFebruary 28, 2020
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ အမိန့်ကြေညာစာ ၁၉/၂၀၂၀ ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကူးစက်ရောဂါ (သို့မဟုတ်) တိုင်းကြားရမည့် ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြီး၊ ထုတ်ပြန်ချက်အမိန့်ကို မရုတ်သိမ်းသမျှကာလပတ်လုံး အတည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ထိုပြန်ချက် ထုတ်ပြန်ပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ သတင်းဝက်ဆိုက်ဒ်တွေ၊ ဖေ့ဘွတ်စ် သတင်းပေ့ချ်တွေကနေ “ကိုရိုနာဗိုင်းစ်ကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးသွားသော်လည်း တုန်လှုပ်မှုမရှိသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ” ဆိုတဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံအမှားတွေကို အသုံးပြုပြီး သတင်းတွေတက်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းအမှားတွေမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် H1N1 ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ကြောင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း-ရန်ကုန်ကလည်း တုန့်ပြန်ပြောဆို...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… သတင်းမှားဆိုတာ သတင်းအချက်အလက်တွေပေါ်ပဲ အခြေခံတတ်ကြပြီး လူတွေရဲ့ အမြင်တွေဝေဝါးအောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းမှားတွေထဲကမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အတုတွေ ကလဲ တစ်ခုအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အတုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကတော့ “စစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအား AA အဖွဲ့မှ သတိပေးစာပို့” တယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်အတုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) AA က ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကို သတိပေးစာပို့တယ်ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ အတုပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ထုတ်ပြန်ချက်အတုပါ 12/2/2020 ရက်စွဲသည် AA မှ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟုတ်မှန်မှုမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုသည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် (၃) တရားဝင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်း ဖော်ပြထားတာလည်းမရှိသလို၊ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတ...
အခုချိန်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဗိုင်းရပ် (၂) မျိုး အကြောင်းကို နည်းနည်းလေး ပြောပြပါရစေနော်။ ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ပြောရင် သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး သိရှိပြီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း လူတွေကို အတိဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
တွေးပြီးမှယုံFebruary 4, 2020
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အခုချိန်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ ဗိုင်းရပ် (၂) မျိုး အကြောင်းကို နည်းနည်းလေး ပြောပြပါရစေနော်။ ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ပြောရင် သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး သိရှိပြီးဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်း လူတွေကို အတိဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းတွေ ကုထုံးတွေနဲ့ ပြန်လည်ကုစားနိုင်မှသာ ပျောက်ကင်းသက်သာလာနိုင်မှာပါ။ အခုပြောပြချင်တာတော့ မြေပြင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းပါပဲ။ ပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ပြည်နယ်မှာ တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် (ခေါ်) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အခု တရုတ်ပြည် ဝူဟန်မြို့တွင်မက တခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာကို သူငယ်ချင်းတို့လည်း သိရှိပြီးဖြစ်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အခုရက်ပိုင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့် စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေချိန် သတင်းမှားတွေ တော်တော်များများဖော်ပြနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတည်းကမှ တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းမှားတစ်ပုဒ်အကြောင်း ကို တွေးပြီးမှယုံကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကတော့ “ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူအယောက် ၄၀ ခန့် ဖားကန့် ဆိတ်မူရွာမှာ သေဆုံး” ဆိုတဲ့ သတင်းမှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ လူတွေစိုးရိပ်ပူပန် ကြောင့်ကြမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သတင်းပါ ဓာတ်ပုံကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအုပ်စု ဆန်ခါမှော်မှာ တနိုင်တပိုင်ကျောက်တူးဖော်နေတဲ့ ဒေသခံများ ကျောက်ကျောပြိုကျပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း… အခုလိုအချိန်မှာ သတင်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သတင်းတွေ တွေ့တိုင်း အလွယ်တကူမယုံကြည်ပဲ တရားဝင်သတင်းဌာနတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေက ထုတ်ပြန်ချက်တွေ သတင်းတွေကို […]
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အခုရက်ပိုင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့် စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေချိန် သတင်းမှားတွေ တော်တော်များများဖော်ပြနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတည်းကမှ တွေ့ရှိရတဲ့ သတင်းမှားတစ်ပုဒ်အကြောင်း ကို တွေးပြီးမှယုံကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကတော့ “ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူအယောက် ၄၀ ခန့် ဖားကန့် ဆိတ်မူရွာမှာ သေဆုံး” ဆိုတဲ့ သတင်းမှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ လူတွေစိုးရိပ်ပူပန် ကြောင့်ကြမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) သတင်းပါ ဓာတ်ပုံကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းအုပ်စု ဆန်ခါမှော်မှာ တနိုင်တပိုင်ကျောက်တူးဖော်နေတဲ့ ဒေသခံများ ကျောက်ကျောပြိုကျပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း… အခုလိုအချိန်မှာ သတင်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့ သတင်းတွေ တွေ့တိုင်း အလွယ်တကူမယုံကြည်ပဲ တရားဝင်သတင...
ဒီနေ့ပြောပြချင်တာလေးကတော့ ကြေညာချက်အတုကိစ္စလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သတင်းတု သတင်းမှားတွေကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ကြေညာချက်တုပြုလုပ်ပြီး သတင်းတု ဖန်တီးတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်အတု တွေထွက်ပေါ်နေတာကို သူငယ်ချင်းတို့လဲ သတိထားမိမှာပဲလို့ တွေးပီးမှယုံက မျှော်လင့်မိပါတယ်။
တွေးပြီးမှယုံJanuary 23, 2020
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေ့ပြောပြချင်တာလေးကတော့ ကြေညာချက်အတုကိစ္စလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သတင်းတု သတင်းမှားတွေကို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ကြေညာချက်တုပြုလုပ်ပြီး သတင်းတု ဖန်တီးတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေညာချက်အတု တွေထွက်ပေါ်နေတာကို သူငယ်ချင်းတို့လဲ သတိထားမိမှာပဲလို့ တွေးပီးမှယုံက မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ပြုလုပ်တဲ့ ကြေညာချက်အတုကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောစကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြေညာချက်အတုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၆ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ YRTA (၃) နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ရိုဟင်ဂျာ ဟု သုံးနှုံးခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်သည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သဘောထားထုတ်ကြေညာချက် အတုတစ်စောင်ကို...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… Myanmar Now ကနေ သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးထားတာကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ “လူကြိုက်များစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတင်းမှားများ၊ သတင်းတုများဖြန့်ဝေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် တရားဝင်သတင်းဌာနများထက် လူအများ၏ ကြည့်ရှုမှု ပိုမိုများပြားနေသော်လည်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု လုံးဝမရှိပေ။” “အဆိုပါကောလာဟလနှင့် သတင်းမှားများကို Click-bait Website ဟု ခေါ်သည့် လူကြည့်များစေရန် ဖြားယောင်းသည့် အကြောင်းအရာများ ရေးသားပြီး ဝင်ငွေရှာနေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်ကို Myanmar Now က တွေ့ရှိထားသည်။” credit # Myanmar Now
သူငယ်ချင်းတို့ရေ... Myanmar Now ကနေ သတင်းတု၊ သတင်းမှားတွေ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း ဖော်ထုတ်ရေးထားတာကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ "လူကြိုက်များစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သတင်းမှားများ၊ သတင်းတုများဖြန့်ဝေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် တရားဝင်သတင်းဌာနများထက် လူအများ၏ ကြည့်ရှုမှု ပိုမိုများပြားနေသော်လည်း တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု လုံးဝမရှိပေ။" "အဆိုပါကောလာဟလနှင့် သတင်းမှားများကို Click-bait Website ဟု ခေါ်သည့် လူကြည့်များစေရန် ဖြားယောင်းသည့် အကြောင်းအရာများ ရေးသားပြီး ဝင်ငွေရှာနေသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များက ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်ကို Myanmar Now က တွေ့ရှိထားသည်။" https://www.facebook.com/myanmarnownews/posts/1607073522773713?__xts__%5B0%5D=68.ARAEi73fKEfRIvWFcpZCJBlkEwmCNDSWFZ6p59Af_xGx_0RYXH6-n-s5kxK7PP11G0qP9SyMxD_ilaKi3rv0i0o128laOdT7TEgd8D3VjzDmumTg2S-YrqcnHnP6d851E7nSfiDrq7-87cVAtEzCyFBtpyKMB6pwn...
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြေညာစာအတု တော်တော်လေးပြန်နှံ့နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအမိန့်ကြေညာစာအတုဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ဆရာ/ဆရာမများ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုရာတွင် ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းများကို လေးစားနာရန် တိုက်တွန်းပြောကြားချက်ကို အခြေခံကောက်ယူပြီး လိုသလို ဖြည့်စွက်ရေးသားထားတဲ့ ကြေညာချက်အတုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်အတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Myanmar Harp Media မှ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “စာအတုထဲမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၂၀)ဆိုတာပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ခုမှ ၉ ရက်နေ့ပဲ ရှိသေးတယ်။ဒီ ၉ ရက်ထဲမှာ အစည်းအဝေးက ၃၂ခု ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုက အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကစာ။ဒီစာကို ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အမှန် ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က လက်မှတ်မထိုးရဘူး။နောက် ရုံးတံဆိပ်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုတဲ့ တံဆိပ်။စာအမှန်ဆို ဒီစာမှာ ဒီရုံတံဆိပ်မရှိရဘူး။နောက် ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးကျော်ဝင်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်က […]
သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြေညာစာအတု တော်တော်လေးပြန်နှံ့နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအမိန့်ကြေညာစာအတုဟာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင် ဆရာ/ဆရာမများ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုရာတွင် ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းများကို လေးစားနာရန် တိုက်တွန်းပြောကြားချက်ကို အခြေခံကောက်ယူပြီး လိုသလို ဖြည့်စွက်ရေးသားထားတဲ့ ကြေညာချက်အတုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်အတုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Myanmar Harp Media မှ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုလေးဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “စာအတုထဲမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၂/၂၀၂၀)ဆိုတာပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ခုမှ ၉ ရက်နေ့ပဲ ရှိသေးတယ်။ဒီ ၉ ရက်ထဲမှာ အစည်းအဝေးက ၃၂ခု ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုက အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကစာ။ဒီစာကို ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။အမှန် ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က လက်မှတ်မထိုးရဘူး။နောက် ...